चुटकिलाः साँझ फ्रि छौ ? - Everest Dainik - News from Nepal
चुटकिलाः साँझ फ्रि छौ ?
एउटी सुन्दर युवतीले एउटा अफिसमा सेक्रेटरीको काम शुरु गरिन ।
एकदिन ऊ फन्किँदै हाकिमको क्याबिनबाट बाहिर निस्किई
सँगै काम गर्ने साथीले सोधी– ओई के भो तँलाई ?
सेक्रेटरीः कुकुर साला साँझ फ्रि छौ भनेर सोधिरा’थ्यो
साथीः अनि ?
सेक्रेटरीः अनि मैले खाली नै छु भनेपछि खातेले ६० पेजको टाइपिङ गर्न पो दिन्छ
याे पनि पढ्नुस नेपाली चुट्किलाः शेरे र उसकी चलाख बुडी